Armand, mpiandry ny fasam-bahiny Anjanahary: « Raisiko ho toy ny velona avokoa ireo maty milevina eto » | NewsMada
Armand, mpiandry ny fasam-bahiny Anjanahary: « Raisiko ho toy ny velona avokoa ireo maty milevina eto »
Par Taratra sur 27/10/2021
Asa hafa indray. Mpiandry ny fasam-bahiny etsy Anjanahary Rakotoarisoa Armand. Nisy fotoana niainany tahotra sy horohoro tanteraka. Efa tsy matahotra intsony amin’izao fotoana izao ary efa zatra miaina amin’ny asany toy ny olon-drehetra.
Niambina teny an-toerana tao anatin’ny fito taona, andro aman’alina nifandimby tamin’ireo mpiara miasa aminy i Armand. “Tena sarotra tamiko tamin’ny voalohany ny niditra hiasa alina tato satria fasana no andrasana”, hoy izy. Rehefa nandeha anefa ny fotoana, resy lahatra ny tenany fa fanasoavana sy asa tahaka ny an’ny rehetra ihany io ataony io. “Raisiko ho toy ny velona avokoa ireo rehetra milevina ato”, hoy izy. Nazoto amin’izany ny lehilahy nanadio sy nikarakara ireo rehetra milevina ao an-toerana satria nosokajiny ho fanasoavana izany. Miditra miasa ary tsy mivoaka raha tsy afaka 24 ora, saika ataon’i Armand avokoa ny fanadiovana, fanaraha-maso ny faritra hatramin’ny fandevenana ireo razana tsy misy mpanaraka.
Nanampy ny fananana mokondoha…
Tsy tafandry mandry amin’ny alina izy. Anisan’ny efa nisehon-javatra tao amin’io toeram-piasany io i Armand. “Avy any Andravoahangy, nisy nibatabata tao ambony fandrina aho indray alina ary tena taitra mihitsy”, hoy izy. Noho ny nifoha, tsy nahita inon’inona tao anatin’ny tranony i Armnad ka raiki-tahotra hatramin’ny marain’ny andro. Tsy nataony nampihemotra azy hijanonana amin’ny asany izany fa namafisiny ny herin-tsainy amin’ny maha mpiambina ny toerana. Tsy manana eritreritra ny hiova asa intsony, araka izany, i Armand satria namelomany ny vady aman-janany hatramin’izay io asa io. Efa lasa fahazarana ny mandevina ireo faty maro avy any amin’ny tranom-paty, izay tsy misy mpaka ary nataony ho fahafinaretana indray aza izany. ‘Efa tsy misy fianakaviana miraharaha intsony ireny olona ireny fa zava-dehibe ho ahy sy ny mpiara-miasa amiko ny manantontosa ny adidy farany ho azy ireny”, hoy hatrany i Armand.
Miezaka mitandrina ny fandriampahalemana…
Misahana ny toerana mirefy 12 Ha ao Anjanahary, tsy voasahan’i Armand sy ny mpiara-miasa aminy irery ny toerana rehefa tonga ny tsy fandriampahalemana. “Misy amin’ireo olon-dratsy no manendaka mpandalo avy any ivelany ka mitsambikina aty anatin’ny faritra”, hoy Armand. Tsy afa-manoatra anefa ny mpiandry ny faritra sy ny namany noho ireo olon-dratsy mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika indraindray. Aleon-dry Armand sy ny namany manamafy ny fiarovan-tenany ka tsy mivoaka ny trano fonenan’izy ireo. Matetika izy no voatondro ho mpiray tendro amin’ireo olon-dratsy, saingy nambarany fa lohalaharana ny fiandrasana ny faritra ho azy. Ankoatra ireo mpanendaka, misy koa ny mpamaky fasana. “Ireo zavatra heverin’ireo olon-dratsy fa sarobidy any amin’ireo vahiny milevina eto no alainy”, hoy i Dadisse, mpiara-miasa amin’i Armnad. Efa nitsahatra moa io asa ratsy io ankehitriny noho ny fanaraha-maso tsy mijanona ataon’ny mpitandro filaminana ao anatin’ny faritra miaraka amin-dry Armand sy ny namany.